Ishukumisi se-Fisker, imbangi ende yeTesla | Iindaba zeGajethi
UJuan Luis Arboledas | | Izaziso, Te knoloji
Ukuba ungumthandi wetekhnoloji ngaphandle kwamathandabuzo kwezi ntsuku uya kuba uyazi ngayo yonke into eyenzekayo kwi CES ukuba ubhiyozela eLas Vegas. Umsitho wokwamkelwa kwehlabathi apho kukho indawo yokubonisa kwalo naluphi na uhlobo lwento enqabileyo kwihlabathi lobugcisa kwaye, eli candelo libanzi kakhulu. Ngenxa yoku, namhlanje ndifuna ukuthetha nawe kungekuphela ngeendaba ezinxulumene nehlabathi lezithuthi kunye nenkqubela phambili yayo ingumba wokuqhuba ngokuzimela, kodwa malunga nento ebambekayo ngakumbi namhlanje efana iimoto zombane.
Kwezinye iinyanga besisazi inyani ukuba amakhwenkwe Umlobi Bagqibezela iinkcukacha zokufumana isithuthi kwinqanaba lokuqonda elinje Isindululo se-E, into ekusele ukuba inde. Ngelixa iinjineli zayo kunye nabaqulunqi besebenza, akukho nto ilunge ngakumbi kunokubonisa isiganeko esinjengalesi kunye neprototype ekwaziyo ukushiya ngokoqobo wonke umntu okhoyo evule imilomo.
1 Nje ukuba ihlasele imarike, olona hlobo lusisiseko lwe-E-motion ye-Fisker luya kumaxabiso nge- $ 129.000.
2 Imizuzu eyi-9 yokutshaja kwi-E-motion ye-Fisker iyakwanela ukuhamba ezinye iikhilomitha ezingama-200
Nje ukuba ihlasele imarike, olona hlobo lusisiseko lwe-E-motion ye-Fisker luya kumaxabiso nge- $ 129.000.
Ukuthetha malunga nokushukuma kwe-E-Fisker kuthetha ngemoto ethe kwiinyanga nje ezidlulileyo kwamiselwa amarhe malunga nento, nokuba yeyiphi na kwintengiso, enokuthi okanye inganiki. Ngale nto engqondweni, ngokuqinisekileyo uya kuqonda ukuba kungaphezulu kwesiqhelo ukuba kukho amajelo eendaba amaninzi afuna ukubalisa kule nto qhubeleka yesithuthi esifuna ukubonelela nge-halo yobutofotofo engaxabiswanga nguTesla ngelixa kugcinwa iimpawu ezithile ezinokubakho kubathengi bolu hlobo lwesithuthi kwimoto yabo entsha.
Ukuya kwinkcukacha ezithe kratya kwinqanaba loomatshini, phantsi kwegama le-E-motion sifumana imoto imoto yombane ethi, ngokutsho kwamagosa akhoyo eCES 2018 efika evela kwiiofisi eziphambili zeFisker uqobo, iyakwazi ukuba nomzimba ohloniphekileyo kwaye esondela Iikhilomitha ezili-650, yonke le nto, ufumana i- Isantya esiphezulu sama-250 km / h okanye ukukhawulezisa ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100 km / h kwimizuzwana engaphantsi kwemithathu. Ngokumalunga nexabiso, ngokwengxelo evela kwinkampani uqobo, iya kuqala ngaphakathi IRandi ye129.000.
Ngaphandle kwento yokuba abathengi abaninzi, njengoko besesitshilo ngaphambili, baya kukhetha isithuthi esinjengale enkosi kwiinkcukacha ezinje ngobunewunewu obungaphakathi obunokubonelelwa, iingcango zayo zinomdla wokuvula okanye izibonelelo zayo, inyani kukuba kwinqanaba lobuchwephesha ikwanguye novulindlela. Umzekelo ocacileyo wayo yonke le nto sinayo kwinto elula njengeebhetri zayo, ngokwenkampani, i-Fisker E-motion iya kuba sisithuthi sokuqala ukufikelela kwimarike isebenzisa iibhetri zikarhulumente eziqinileyo.
Imizuzu eyi-9 yokutshaja kwi-E-motion ye-Fisker iyakwanela ukuhamba ezinye iikhilomitha ezingama-200
Eyona nto inomdla ngokusetyenziswa kwezi bhetri kukuba, nangona ingakhange ityhilwe ukuba njani, iFisker okanye omnye wabanikezeli bayo ngewayekwazile ukufumana isisombululo sokunciphisa amaxesha okutshaja kweebhetri kangangoko kunokwenzeka. Ngokwoshicilelo olukhutshiweyo, kubonakala ngathi lilungile Imizuzu ye9, Umnini we-Fisker E-motion uya kuba nentlawulo eyaneleyo yokuhamba Iikhilomitha ezili-200.
Ngokusekwe kwiingxelo ezenziwe kweli nqanaba ngu UHenrick Fisker, CEO yangoku yenkampani:
Sinovuyo olukhulu ukubonisa imeko yethu eqinileyo yebhetri kunye nomsebenzi wezithuthi, buqu, kwinqanaba elinje kunye nehlabathi. UFisker Inc. uzama ukophula imiqobo, ekhokelela kubuchwephesha bezithuthi kwaye ekugqibeleni enze ezona zinto zibalaseleyo ezinomtsalane, ezisebenzayo nezizayo zombane.
Ukuba unomdla kwisithuthi esifana nale uyibonayo kwiscreen, yixelele ukuba uFisker uzimisele ukuvelisa isiqalo esifanayo ngaxa lithile ngo-2019, unyaka apho iiyunithi zokuqala ziya kusiwa kubaninizo, nokuba kunjalo, ayizukude i-2020 okanye i-2021 xa kuqala imveliso enkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Fisker E-intshukumo, imbangi ende yeTesla